IIKHABHATHI ZEKHITSHI YESINTU (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabhathi zeKhitshi yesiNtu (Iingcamango zoyilo)
Iikhabhathi zeKhitshi yesiNtu (Iingcamango zoyilo)
Wamkelekile kwigalari yethu enezinto ezintle iikhabhathi zasekhitshini kubandakanya imibono yoyilo ngemibala, iintlobo zomnyango, izixhobo zekhompyutha kunye nezitayile.
Isitayile sendabuko sasekhitshini saziwa kakhulu kuyilo olukhulu. Nangona inembali kwindalo, iyaqhubeka nokuba yenye yezona ndlela zithandwayo ngabanini bamakhaya kunye nabaqambi ngokufanayo, ngenxa yesibheno sayo esingapheliyo kunye nobuhle bakudala.
Iprojekthi yamakhitshi emveli yokuphakama kunye nokunethezeka kwamakhaya aseMelika nawaseYurophu ngenkulungwane ye-18, 19 neye-20. Ubutyebi, ubumnandi beklasikhi kunye nobuhle beendlela zesiko lekhitshi ziboniswa kakhulu kwikhabhathi yayo emangalisayo kunye nangokhuni. Zonke iinkcukacha ezithe zafumaneka kwiikhabhathi zasekhitshini zemveli zizinto eziyinyani ezifanele ukuboniswa kulo naliphi na ikhaya.
Apha ngezantsi sijonga ezinye zeempawu eziphambili zoyilo lwekhabhathi zasekhitshini ukukunceda uthathe isigqibo sokuba ubuhle babo bembali bulungile na kwikhaya lakho. (Ndwendwela eli phepha ezinye iintlobo ze Izimvo zekhabhinethi yasekhitshini )
Izitayile zeKhabhinethi yesiqhelo
Uyilo lweeKhabhinethi zeMveli
Iimathiriyeli zeKhitshi leMveli laseKhitshini
Ukugqitywa kweeKhabhinethi zeMveli zaseKhishini
Izitayile zeHardware zeKhabhathi yasekhitshini yesiNtu
Izinto zoyilo lweeKhabhathi zekhitshi leMveli
Uhlobo lweNdlu yamasango eKhabhinethi yaseKhitshini
Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi emhlophe
Iikhabhathi eziPeyintiweyo zaMandulo eziPeyintiweyo
Isitayela sekhabhinethi yekhitshi yendabuko yigama lesambulela kwiindlela ezininzi ezahlukeneyo zexesha. Ibandakanya uyilo lwekhabinethi eyahlukeneyo enembonakalo yesiginitsha - ngokuxhomekeke kunyaka okanye kwinkulungwane yokuqala.
Isitayela sekhabhinethi yekhitshi yendabuko iquka isitayela se-Antique, isitayela seCottage, isitayela selizwe, ukungena kwekhaya, ubuGcisa kunye nezobugcisa, isitayela sezandla, isitayela seMishini, isitayela saseMerika sasekuqaleni, ilizwe laseFransi, isitayela sehlabathi elidala, isitayela seRustic, isitayela seShaker, isitayela seColonial, isitayela seTudor kunye nesitayile seVictorian. Inokubandakanya izitayile zekhabinethi ekhitshini ezineempembelelo zenkcubeko ezinje ngesimbo sase-Itali, isitayile saseMexico kunye nesitayile saseTuscan.
Iimpawu zoyilo lwekhabhathi zemveli zasekhitshini
Ngokubanzi, iikhabhathi zasekhitshini zemveli ziyaziwa ngesibheno sabo esifudumeleyo kunye neklasikhi. Ibonakala ngohlobo oluphakamileyo kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha, okubonakaliswa kukusetyenziswa kwesiNgesi nesiFrentshi.
Iikhabhathi zasekhitshini zemveli zijongeka ngakumbi 'zinzima kwaye zinamandla xa kuthelekiswa nekhabhathi zekhitshi zale mihla ikakhulu ngenxa yokuba ubukhulu becala zenziwe ngamaplanga. Inombhalo ngakumbi, ngaloo ndlela iprojusa isibheno se-rustic kunye ne-vibe yexesha elifanelekileyo. Iikhabhathi zasekhitshini zemveli nazo zinembonakalo endala, ezenza ukuba izive ilungile kwaye ipholile.
Xa kuthelekiswa nekhabhathi zekhitshi zale mihla kunye nezexesha langoku, iikhabhathi zekhitshi zesiko zikhangeleka zikhulile kwaye zivelisa indlela yokuziqhelanisa. Ilandela uhlobo olungqongqo lobugcisa, kodwa iiprojekthi zihlala kakuhle.
Isishwankathelo, nantsi ezinye zeempawu ezahlukileyo zeekhabhathi zekhitshi zemveli:
Ukujonga okungapheliyo -Iikhabhathi zasekhitshini zemveli zinokuvavanywa koyilo okubuyela kumaxesha angaphambili. Ukujongwa kwayo okungenasiphelo kukwayenye yezona zinto ziluncedo kakhulu, njengoko kungaphumi kwifashoni kwaye kungqinwa ukuba kuhlala amashumi eminyaka.
Ukuqwalaselwa kweenkcukacha - Iikhabhathi zasekhitshini zemveli zijolise ekuhombiseni ngokusetyenziswa kweenkcukacha zokuhombisa kunye nezinto ezifana nokubumba, iitrayi, izixhobo kunye nemikrolo.
Ukusetyenziswa kwezinto zendalo ezifana nemithi etyebileyo - Iikhabhathi zekhitshi zemveli ziyaziwa ngokusetyenziswa kwazo kakhulu kwezinto zendalo ezinje ngomthi oqinileyo kugqityiwe.
Iphalethi engathath'icala kunye nemibala yomhlaba - Ngokungafaniyo neekhabhathi zekhitshi zale mihla ezilungiselelwe ii-hues ezinesibindi kunye neziphilayo, iikhabhathi zekhitshi zemveli zisebenzisa umbala wombala we-aclassic oqukethe ukungathathi cala okufudumeleyo nokupholileyo kunye nemibala yomhlaba.
Yenziwe ukuba ifane nefenitshala yakudala -Ukuba projekthi i-vibe efana nekhaya, iikhabhathi zekhitshi zesiko zihlala zenzelwe ukuba zifane nefenitshala yasendulo. Iinkcukacha zefanitshala ezinjengemilenze eqingqiweyo, iposti kunye neenyawo zihlala zongezwa kwiikhabhathi zasekhitshini.
Ubeko lobume, umbala kunye neenkcukacha- Ukuhlala unyanisekile kubuhle bayo obucokisekileyo, iikhabhathi zekhitshi zemveli zibeka ipremiyamu kwizinto zokuyila. Ngokungafaniyo nekhabhathi zekhitshi zanamhlanje ezinembonakalo entle kwaye egudileyo, iikhabhathi zasekhitshini zesiko zinombhalo ngakumbi. Ukugqitywa kokugqitywa, njengokufaka i-glaze ngaphezulu kwepeyinti, kuqhelekile njengoko kunika ubunzulu obungaphezulu, idrama kunye nobukhulu kuyilo lwekhabhathi. Olu phawu loyilo lwesiko Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zakudala kunye nesiqithi esimnyama ngokwahluka okumangalisayo kunye neendidi ezimbini zeetafile.
Uhlobo lwendabuko lwekhitshi lujolise ekungeniseni ngaphandle ekhaya ngokusebenzisa izinto zendalo ezinje ngomthi oqinileyo kwisiphelo sabo esityebileyo, sendalo. Le mithi ihlala ikrolwe ukongeza uburhabaxa kunye nokuhombisa kwinkangeleko yazo.
Nayi eminye imizekelo yeenkuni ezisetyenziselwa uyilo lwekhabinethi yendabuko
Itsheri -I-Cherry lolona hlobo luhle lweemithi kwiikhabhathi zasekhitshini zemveli. Umbala wayo ocacileyo obomvu bumdaka kunye neepateni zokucoca ulungele ukutyeba kunye nobuhle be-aesthetics yoyilo lwendabuko lwekhitshi. Iinkuni zeCherry zixabisekile ngokuguga kamnandi njengoko imibala yendalo ithatha iithoni ezahlukeneyo ngokuhamba kwexesha, ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ebomini bayo.
Iikhabhathi zekhitshi zemveli zecherry zihlala ixesha elide kwaye zinokuhlala amashumi eminyaka. Zijongeka zilungile ekugqityweni kwendalo kodwa zinokuphuculwa ngombala ocacileyo wokhuni ukuze ziyenze ibonakale iphantsi. Jonga igalari yethu ye Iikhitshi zeenkuni ze-cherry Apha.
Oak -Imithi ye-Oak yaziwa ikakhulu ngombala wayo owahlukileyo wegolide, kodwa umbala wayo uvela emhlophe ukuya kwiithoni ezipinki ezinemigca eluhlaza eluhlaza, emthubi kunye emnyama, kuxhomekeke kwidipozithi ekhoyo kwimithi. Umbala waso wendalo ofudumeleyo ulungelelene ngokugqibeleleyo kubuhle obucebileyo bekhabhathi yekhitshi yemveli. Ukongeza, i-oki yomelele, ihlala ixesha elide kwaye iyomelela. Ezona ntlobo zimbini zom-oki zisetyenzisiweyo kwiikhabhathi zekhitshi zemveli yiRed Oak kunye neWhite Oak. I-oki ebomvu inebala eliphantsi elibomvu nelityheli. Ibiza kancinci xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zeenkuni. I-oki emhlophe, kwelinye icala, inombala wegolide ngakumbi kunye nepateni ecekeceke yegreyidi. Oku kuhlala ngekota kwaye kusetyenziswa kwikhabhinethi yamasiko ekhitshi yesiko.
Iphayini -Umthi wePayini ubonakala ngenkangeleko yawo enamaqhina kunye nombala otyheli omthubi. Ukuba incasa yakho ayihambelani nemithi etyebileyo, enzulu enemibala emnyama, emva koko ikhabhinethi yekhitshi lepeyinti lolunye lweendlela onokuzihlola. Ipayini luhlobo lomthi othambileyo kwaye inomdla wokuthambeka, yiyo loo nto ngaphambi kokuba yenziwe kwifenitshala okanye kwikhabhathi, ipayini ihlala iphantsi koxinzelelo kunyango ukomeleza ukomelela kwayo. I-Pine ilungile ishiywe kumbala wayo oluhlaza, okhanyayo kodwa inokudyobheka ukufezekisa umbala omnyama. Ezinye iintlobo zepine ezithandwayo ezisetyenziselwa uyilo lwekhabhathi yekhitshi yendabuko yi-Eastern white pine kunye ne-Western white pine.
Ezinye iintlobo zeenkuni ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zemveli zii-hickory, imephu, ialder, itiak, i-walnut, i-birch, uthuthu kunye nemephu.
Olunye uphawu oluphambili loyilo lwekhabhathi yekhitshi yemveli kukubukeka kwabo okudala, okudala. Ukufumana ixesha elinxitywayo lokujonga iikhabhathi zasekhitshini zemveli akuthethi ukuba ufuna ukufumana iinkuni ezibuyela kwinkulungwane ye-18. Uhlobo oludibeneyo lolu hlobo lwekhabhathi yekhitshi lufezekiswa ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba ezivelisa isibheno esidala, esidala. Nazi ezinye izinto eziqhelekileyo zokugqiba iikhabhathi zasekhitshini:
Injengokubengezela - Ukuba uyayithanda imbonakalo ye-patina kwiikhabhathi zakho zasekhaya zasekhitshini, i-glazing yeyona ukubheja kwakho. Ukugqitywa okugqityiweyo luhlobo lweprimiyamu yekhabinethi yemveli ekhitshini evelisa iklasikhi, ukubukeka okunxibe ixesha. Amaglasi akhanyayo okanye ulwelo oluselubala olucace gca olusulwayo ngesandla ngaphezulu kwekhabhathi emva kokudyobha okanye ukupeyinta. Oku kuguqula kwangoko ukubukeka okudala kodwa kwongeza ukukhanya okukhanyayo kwiikhabhinethi zasekhaya zasekhitshini.
Injengokubengezela ikwasetyenziselwa ngokufanelekileyo ukuqaqambisa iinkcukacha zokuhombisa kunye nemikrolo enjengokubumba kunye nokucheba kuba yenza isiphumo somthunzi. Iza ngeendlela ezimbini eziqhelekileyo ezibizwa ngokuba yi-glaze emhlophe kunye ne-glaze emnyama. I-glaze emhlophe isetyenziselwa ukufaka iikhabhathi ezimhlophe ezinombala omnyama zisetyenziselwa iikhabhathi ezimnyama. Nangona kunjalo, iikhabhathi ezimhlophe zinokusetyenziswa kunye ne-glaze emnyama ukuba ufuna ukujonga okungaphezulu.
Ukubandezeleka - Ukubandezeleka luhlobo lwefeksi yokugqiba ubuchule obunika iikhabhathi zasekhitshini zemveli ukubukeka okudala, okudala. Izifundo ezigqityiweyo ezibandezelekileyo njengezinto zokuqala zekhabethe ezinje ngomthi, ukwenza isanti ephindaphindayo kunye nokubetha ukwenza ubume obugugileyo. Emva koko, i-primer okanye ipeyinti yongezwa emva koko ingubo ephezulu ye-antiquing glaze ibekwe kumphezulu wekhabhinethi. Khetha ukugqitywa kokubandezeleka ukuba ufuna i-vibe engaphezulu kweekhabhinethi zakho zendabuko. Funda ngakumbi malunga nendlela yokwenza ukupeyinta iikhabhathi ukujonga izinto zakudala Apha.
Ukuqhekeza - I-Lacquering ibonelela ngokugqitywa okuphezulu kakhulu kokuqaqamba. I-Lacquer luhlobo lwezinto zokugqiba ezikhuselayo ezenziwe nge-shellac kunye nobubanzi ukusuka kwibala elinemibala ecacileyo. Xa i-lacquer yoma, umphumo uba yindawo enzima kakhulu kwaye ihlala ixesha elide. Ungasebenzisa i-lacquering ukuba ufuna ukunamathela kwimbonakalo yoqobo lwekhabhathi yakho yasekhitshini kodwa ufuna ukuyinika sheen.
Ibala - Ukugcoba kusetyenziswa rhoqo ukuba ufuna ukubonisa ubuhle bendalo bekhabhathi zekhitshi. Inokuwuphucula umbala kwaye ivelise umzekelo wokukrola wekhabhathi zekhitshi zemveli. Amabala angena kwiithoni ezahlukileyo ezinje ngombala obonisa umbala wendalo wokhuni, kunye nebala eliqinileyo elinokutshintsha umbala wokhuni kunye nokunceda ukufihla ukungafezeki kwawo. Khetha iikhabhathi zasekhitshini ezimdaka ukuba ufuna ukubonwa okwenziwe ngesandla ekhitshini lakho.
Ukupeyinta -Ipeyinti yindawo ethandwayo yokugqiba ikhitshi yokwenza ngokwakho iiprojekthi. Ipeyinti isetyenziswa ngesiqhelo xa ufuna ukufihla iipateni zokuhombisa iikhabhathi zekhitshi. Nangona kunjalo ukuba ufuna ezinye iinkozo zendalo zibonise, iikhabhathi zasekhitshini zesintu zinokucolwa mhlophe. Ipeyinti inokusetyenziselwa ukunika iikhabhathi zasekhitshini zemveli umbala omtsha ngokupheleleyo okanye isibheno sokukhanya nesithobekileyo ngakumbi xa kuthelekiswa nemithi ecebileyo. Imibala yepeyinti eqhelekileyo kwiikhabhathi zasekhitshini ubukhulu becala ayithathi cala njengemhlophe, imhlophe, beige, cream kunye nesanti.
Ayigqitywanga - Ukujongwa ngakumbi kwe-rustic, iikhabhathi zasekhitshini zemveli zamaplanga zinokushiywa zikwimeko yazo engagqitywanga yendalo. Ezinye izinto ezinokusetyenziselwa ukuphucula umbala wendalo weplanga yi-shellac, ivanishi kunye neoyile esekwe okanye i-polyurethane esekwe emanzini.
I-Hardware yeekhabhathi zasekhitshini zemveli zihonjisiwe kwaye zineenkcukacha, xa kuthelekiswa nezala maxesha zihlala zicacile, zilula kwaye zilungelelanisiwe. Isixhobo sekhabhathi sekhabhathi yekhitshi yemveli siyafumaneka kuyilo olwahlula isimbo sexesha lobugcisa, isitayile seVictorian, ilizwe, indlu encinci okanye ikholoniyali. Ngokwesiqhelo baneenkcukacha zokuhombisa ezinjengokukrolwa kunye neempawu motifs kwijometri, iintyatyambo, amagqabi okanye iifom zokuhambisa. Imilo ikwanobabalo ngakumbi, kunokuba i-angular kwaye iqonde. Izinto eziqhelekileyo zekhitshi lekhabhathi yekhitshi yintsimbi ngumthi kunye nesinyithi esifana nobhedu, isinyithi, ubhedu kunye nobhedu.
Nazi ezinye zeendidi eziqhelekileyo zekhompyuter yehardware yoyilo lwekhabinethi yendabuko:
Ngamaqhina - Amaqhina eminyango yeKhabhinethi ziindala ngokwesiqhelo kwaye zithathwa njengoyilo lwekhabhinethi yokhitshi. Ezi zihlala zincinci ngobukhulu kwaye zihlala zijikeleze okanye zenziwe ngesikwere.
Iikhonkco zingena kwizinto ezininzi ezahlukeneyo ezinje ngesinyithi, ukhuni, okanye iglasi. Ukuba ufuna ukuphambuka kubuncwane bendalo beenkuni, ungafumana ngakumbi isibheno seshishini ngokusebenzisa izixhobo zekhitshi zekhitshi zekhompyuter. Iinkuni ezinamaqhina lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna uhlobo olulula lwezixhobo ezihambelana nezinto kunye nombala wekhabhathi yakho yasekhitshini. Eyona nto idityaniswe kakuhle kunye nekhabhathi yomthi exubileyo kunye nefenitshala endala yefenitshala yesitayile yasekhitshini.
(Iqhina lekhabhathi le-Chrome)
Iindebe kunye nomgqomo wokutsala Iikomityi kunye nemigqomo yokutsalwa kwemigqomo ikwabizwa ngokuba sisiqingatha senyanga sokutsala ngenxa yesimo setyhula. Indebe kunye nemigqomo yokutsala inyuswe ngesiphelo esivulekileyo esijonge ezantsi, yiyo loo nto zinokuqhutywa kuphela kwicala elinye. Imigqomo yendebe kunye notsalo zihlala zisetyenziselwa iidrowa.
Khetha olu hlobo lwekhitshi ye-binte yehardware ukuba awufuni ukujonga okungqongqo, okusesikweni kwaye ufuna ukubonelela ngokutsha kwiikhabhathi zasekhitshini zemveli.
(Indebe ye-nickel ye-Satin iyatsala)
Ukulahla kutsala -Ukutsala okutshixwayo luhlobo lwekhabhathi yentsimbi enesiphatho esijingayo, endaweni yokulungiswa. Ukutsalwa okutsaliwe kufunyanwa kwifenitshala yendabuko kwaye kunokusetyenziswa kunye neekhabhathi zekhitshi eziphakanyisiweyo, i-inset yekhabethe okanye iiglasi ekhokelwayo yokufaka ikhabethe. Indebe kunye nemigqomo yokutsala inembonakalo elula kakhulu efanelekileyo yokuhlisa iikhabhathi zasekhitshini ezimbejembeje. Eyona nto ibhetele idibene ne-classic beige okanye imhlophe iikhabhinethi zasekhitshini zendabuko. Khetha olu hlobo lwesixhobo sekhabhathi yekhitshi yemveli ukuba ufuna ukwenza ifanitshala njengokuziva kwiikhabhathi zakho zasekhitshini okanye ukuba ufuna ukongeza ukubamba kwabafazi kuyilo lwakho lwekhitshi.
Ibha iyatsala Ukutsalwa kwebar kunokuba lide okanye kufutshane kwaye kuyafumaneka kuluhlu lobungakanani kunye nokugqitywa. Ukutsalwa kwebar kunokuhlaziya ikhitshi lakho lemveli kwaye kulinike inkangeleko yangoku. Ezi ntlobo zezixhobo zeminyango zihlala zisetyenziswa kwiingcango zekhabhathi ezithe tyaba, kodwa zikwabonakala zintle kwikhabhathi yesitayile seShaker.
(Ibha yentsimbi engenanto)
Iintambo zokuhlobisa iintambo - Ngokubanzi, ucingo lutsala iikhitshi zekitshi ezinemiphetho elula, ejikeleziweyo, ngaphandle kokugqitha emacaleni. Iprofayili yayo ifana nonobumba omncinci, omfutshane uC.Utsalo lwentambo luza ngeendlela zokuhombisa ezihambelana nobuhle bendalo bekhitshi. Ukutsalwa kweentambo ezichanekileyo zihlala zineenkcukacha zokuhombisa ezinje nge-beading, flute ellipses okanye ipatheni yeentaka.
Ngokubanzi, ukuhombisa ngesandla kunika ngokulula, ukanti akusweleki kubuhle. Khetha iintambo zokuhombisa xa ufuna ukongeza isixa esifanelekileyo sokuhombisa kwiikhabhathi zakho zasekhaya zasekhitshini ngaphandle kokonganyelwa. Ukutsalwa kweengcingo ezichanekileyo kulunge kakhulu kubhangqiwe kunye neekhabhathi zekhitshi ezixineneyo kunye nenani elinobuninzi beenkcukacha zokwakha ezinjengefleyiti, ingcongolo kunye neekholamu zokuhombisa.
Izixhobo zekhompyutha ezinamacwecwe angasemva okuhombisa - Ezinye zehardware zasekhitshini zemveli zibandakanya i-backplate yokuhombisa yokongeza umhombiso kunye nomdla wokuhombisa. Iikhonkco ezinamacwecwe angasemva okuhombisa zihombise ngakumbi endaweni yokusebenza.
Olu hlobo lwekhompyuter yehardware yongeza ifanitshala njengokuziva kwiikhabhathi zasekhitshini zemveli, ngelixa unikezela ingxelo eqinileyo kwisithuba. Khetha amaqhina ngamacwecwe angasemva okuhombisa ukuba ufuna ukunxitywa ukunxiba, kunye nelizwe elidala elisemthethweni liziva lisisiqhelo iihenjisi zekhabhinethi yasekhitshini , iingcango kunye needrowa. Eyona nto ibhetele idibene kunye nefestile yefenitshala kunye nefestile yefestile yendabuko.
Ukugqitywa okuqhelekileyo kwezixhobo zekhabinethi yoyilo lwekhabinethi yendabuko:
Ukugqibezela ukujonga okudala, iikhabhathi zasekhitshini zesiko akufuneki zidityaniswe kuphela noyilo olufanelekileyo lwezixhobo zekhabinethi kodwa kunye nombala ofanelekileyo kunye nokugqiba.
Ngokubanzi, izixhobo zekhabhathi zekhitshi zemveli zinokugqitywa ngezinto zakudala. Nazi izinto ezithandwayo zekhompyuter zekhompyuter kunye nokugqiba:
Ubhedu lweAntique - Ubhedu lwe-antique luphawulwa yiklasikhi, imbonakalo yakudala. Izixhobo zobhedu lwe-antique zomelele kakhulu njengoko zenziwe ngezinto ezahlukeneyo ezinje ngekristale ekhokelayo kunye nepewter. Isixhobo sobhedu se-antique sinobunkunkqele kwaye umbala waso ofudumeleyo onombala ophuzi we-tinge ubhangiswe kakuhle nekhabhathi yokhitshi enemibala ekhanyayo. Umbala wehardware yentsimbi ye-antique ikwavelela ngakumbi kwiikhabhathi ezimhlophe kunye nemibala ye-beige ekhitshini.
Endala - Isixhobo sekhabhinethi esidala se-antique sinombala omdaka obalaseleyo. Iiprojekthi zokugqiba iikhabhathi zekhabinethi yasekhitshini lixesha eligugileyo, isibheno esidala sehlabathi esenza ukuba ilungele uyilo lwekhabinethi yendabuko. Izixhobo ezindala ze-antique zinokudibanisa ngokudibeneyo zonke izinto zokuhombisa ekhitshini lemveli. Ihardware yakudala ye-antique ilunge kakhulu nekhabhathi enemibala ekhanyayo kwaye inokudityaniswa kunye nokubumba kwesithsaba okanye izinto zokuhombisa.
Ubhedu oludala - Ihardware endala yekhabhathi yehardware ikwanokubonakala kwendalo okusikhumbuza ngeembiza kunye neepani ezindala zobhedu. Ubhedu oludala lunombala ogqamileyo ophawulwa yitoni ebomvu ebomvu eyahlukileyo. Izixhobo zekhabhathi ezindala zekhabhathi zisebenza kakuhle kakhulu kwiikhabhathi ezimhlophe, ze-beige kunye nezikhanyayo zemveli. Ukuba ufuna ukudibanisa uyilo lwekhitshi lakho lesiko, zama ukuthelekisa ubhedu oludala lwekhabhathi yekhitshi yehardware enombala ofanayo wetampu kunye nolunye ulungiselelo.
Ibronze yaseVenice - Imnyama kuneoyile exutywe ngeoyile, iVenetian ityhubhu yekhabethe yentsimbi inombala omnyama kakhulu osondele kufutshane nomnyama kodwa uneempawu ezimdaka ngombala okanye ubhedu. Idityaniswa kakuhle nekhabhathi yemibala yasekhitshini emnyama, kodwa yiza nomehluko onomdla xa ubhangqiwe nekhabhathi enombala okhanyayo. Khetha olu hlobo lokugqitywa kwekhitshi yemveli ukuba ufuna i-rustic, isibheno selizwe.
I-oyile yokuthambisa yobhedu -Ioyile exutywe nobhedu ifanisa ukubonakala kwebhedu endala ngokusebenzisa imichiza. I-bronze yebrashi yeoyile inombala omnyama kakhulu oqala ukusuka kwitshokholethi enzulu ukuya kumbala omnyama ongwevu ngobhedu obuphantsi. Yahlukile kwisiphelo sebhedu saseVenice njengoko sinombala okhanyayo, umphezulu weoyile kunye nokugqitywa kwematte. Ioyile yebronze yebronze yekharityhulam yeoyile ifaneleke kakuhle ngombala omhlophe, we-beige okanye okhanyayo wekhitshi ekhitshini. Ngokubanzi, kuzisa ukucoceka kunye nobuhle kuyilo lwekhabhathi yekhitshi yemveli.
Intsimbi yakudala -I-antique yentsimbi yekhabhathi yentsimbi nayo inombala owahlukileyo, kodwa ukubonakala kwayo kugcwele ngokupheleleyo njengoko izaliswe kukungafezeki. Olunye uphawu olwahlukileyo lwezixhobo zekhabethe zentsimbi ze-antique kukuba ithatha imibala eyahlukeneyo, ukukhanya kunye nomnyama, kuxhomekeke kwimeko yokukhanyisa kwendawo. Intsimbi ye-antique yomelele kwaye yomelele. Isebenza kakuhle kuyilo lwekhabhinethi yoyilo yemveli enomxholo welizwe okanye i-rustic vibe.
Mnyama - Isixhobo sekhabhathi esimnyama sihambelana nezitayile zekhabinethi ezahlukeneyo, kubandakanya useto lwendabuko. Yenza ingxelo eqinileyo, kodwa musa ukukhuphisana nobuhle obuhonjisiweyo bekhabhathi zasekhitshini zemveli. Eyona nto ibhangqwe kakuhle kukukhanya okukhanyayo kwendabuko kwikhabhathi yekhabhinethi enje ngemhlophe, beige kunye nokukhanya komthi. Nangona kunjalo, inokusetyenziselwa ukucima iikhabhathi zekhitshi ezinemibala emnyama.
Ukutyikitya ukujonga kweekhabhinikhi zemveli zasekhitshini kuyilwe ngononophelo olungqongqo kwiinkcukacha. Imizobo kunye nezinye iinkcukacha zomthi zonyusa ukujonga okupheleleyo kwekhitshi, ngelixa ukongeza ubunzulu, ubume kunye nobume kuyilo lwekhabhathi.
Ngokukhetha okuninzi kunye noyilo onokukhetha kulo, kulula ukuba uqhutywe nokuhombisa okuninzi ukuhombisa iikhabhathi zakho zasekhaya zasekhitshini. Kodwa ukukhetha efanelekileyo kuya kukunceda uqambe uyilo olulungeleleneyo, olungenabunkunkqele kwaye olungenakuthelekiswa nanto kuyilo lwekhabhathi yekhitshi.
Iinkcukacha ezisetyenziselwa isitayile sendabuko iikhabhathi zasekhitshini:
Ukubumba - Ukubumba kukuhombisa okusetyenziselwa ukuqaqambisa ubume okanye ulwandlalo lwefanitshala okanye ikhabhinethi. Ukubumba kubekwa ngokujikeleze umjikelezo wekhabhathi yekhitshi-phezulu, ezantsi kunye namacala, kungenjalo kungongezwa eludongeni okanye eluphahleni. Ukubumba kuza iimilo ezahlukeneyo okanye iinkangeleko, ubukhulu kunye nezinyuko.
Oku kubandakanya isiseko sokubumba, eziyimpawu zokuhombisa ezihamba ngaphantsi kweekhabhathi ezisisiseko, apho udonga luhlangana khona nomgangatho. Olunye uhlobo ngumbumba wesithsaba, obekwe ngaphezulu kweekhabhathi ezingaphezulu, apho udonga luhlangana khona nophahla. Kwaye okokugqibela, izinto zokuhombisa ezinokuhonjiswa ezinokuthi zibekwe naphina kwikhabhathi.
Ukubumba isithsaba kuvala indawo phakathi kweekhabhathi zodonga nophahla, ngaloo ndlela kuveliswa utshintsho olungenamthungo ngakumbi. Kuba umsantsa awunanto, akukho gumbi lokuqokelela uthuli ngaphezulu kweekhabhathi zakho ezingaphezulu.
Ixabiso - Amaxabiso ziinkcukacha zokuhombisa ezibekwe kwinxalenye ephezulu yekhabethe yekhitshi, ihood okanye ifestile. Kanye ngaphakathi amalengalenga kunye nonyango lwefestile, imisebenzi yevalance njengesakhelo, kwaye ihlala isetyenziselwa ukudibanisa okanye ukuvala iikhabhathi ezingaphezulu kwicala lasekhohlo nasekunene lesinki ukubonelela ngokuqhubeka kunye notshintsho olugudileyo kuyilo.
Amaxabiso athabatha iimilo ezininzi, kodwa oyilo oludumileyo luyi-arch valance. Ukongeza into ebonakalayo enomdla, amaxabiso ahlala enxitywe ngemikrolo kunye nezinye izinto zokuhombisa.
IiCorbels Ngenkcazo yayo yoyilo, i-corbel yiyo nayiphi na into enje ngelitye, isinyithi okanye umthi ovela eludongeni, osetyenziselwa ukuxhasa ubunzima. Ngokusisiseko, bayasebenza kwaye bajongeka njengabakaki. Ngokweyilo lekhabhinethi yemveli, a ikhitshi corbel idityaniswa ngokwesiqhelo nomsebenzi wayo wobuhle, inika inkangeleko yokuba bayayixhasa into yokuyigcina.
IiCorbels zihlala zirhangqiwe okanye ziphindwe kabini, ngelixa uyilo oluntsonkothileyo lubandakanya umsongo omnandi. IiCorbels kuyilo lwekhabhathi yekhitshi yemveli zihlala zibekwa phantsi kwehood yokuhombisa, ngaphantsi kwekhabinethi yesiseko okanye phantsi kwesiqithi esingaphezulu.
Iimbobo zomthi - Ngokhuni iihodo zekhitshi Zizinto zokwakha ezenziwe ngomthi ezisetyenziselwa ukugubungela i-hood yoluhlu. Iirowu hoods zihlala zenziwe ngentsimbi kwaye zilungele ukumiselwa kwekhitshi ngokwesiko ngakumbi, le nkcukacha yeplanga yongezwa ukwenza ukungqinelana ngokubhekisele kwinto leyo kunye nokujongeka ngokubanzi.
Ngamanye amaxesha, isigqumathelo somthi sikwayifihla imibhobho kunye nemibhobho esetyenziselwa inkqubo yokukhupha ikhitshi. Iimbobo zeenkuni zinokuthi zicace okanye zihombise kakhulu kwaye zinokuthatha iimilo ezininzi njengebhokisi elula enjengekhabhinethi, okanye i-tapered shaped. Oku kuhlala kuqhuba ukusuka eluphahleni kuye esiphelweni sendawo.
Imilenze kunye neZithuba -Imilenze kunye neeposti ziikholamu ezinje ngezakhiwo eziqhelekileyo ezime ngendlela esetyenziselwa ukuxhasa ubunzima be Isiqithi sasekhitshini I-countertop, peninsula okanye indawo yokuhlala. Ngamanye amaxesha, ezi nkcukacha zisetyenzisiwe kwiziphelo zeekhabhathi ezisisiseko sobugcisa obongezelelweyo.
Imilenze kunye nezithuba zihlala zinika iikhabhathi zasekhitshini kunye neziqithi ifanitshala njengokuziva. Imilenze kunye neposti nazo zithatha ubume bekholamu ejikelezileyo, skrolela okanye yajika imilenze. Kuxhomekeka kwisithuba sexesha lokuphefumlelwa, imilenze kunye nezithuba zihlala zihonjiswe ngemibala eqingqiweyo. Ezinye zeendlela zayo ezithandwayo ziingcongolo, iflitor, ijijekile, imishini, ubugcisa kunye nemisebenzi yezandla, i-cabriole, ibhola eguqulweyo kunye ne-cabriole eqingqiweyo.
Iinyawo -Iinyawo kukuphuculwa kongezwe emilenzeni nasezithuba ukubanika umbono wobugcisa. Le nkcukacha yokuhombisa ineprofayile esezantsi kwaye inokongezwa phantsi kweekhabhathi ezisisiseko njengenkxaso okanye phantsi kweziqithi zasekhitshini. Eminye imizekelo ethandwayo yeendlela zeenyawo ziinyawo ze-bun, iinyawo zephedi, isikwere okanye iinyawo ezinamakhonkco, umsesane wajika, i-tulip okanye iinyawo zika-Queen Anne.
UkuBuyisa kunye neFluti - Ikwabizwa ngokuba yi-gadrooning, reeding kunye ne-fluting luhlobo lweenkcukacha zokwakha eziqulathe uthotho lwee nkqo ethe nkqo, erhangqiweyo, engqindilili okanye emseleni we concave. Ukuphinda ubuye sisigcini somgca we-convex, ngelixa ukubetha sisinciphiso sekhonkrithi. Ezi nkcukacha zokuhombisa zihlala zisetyenziswa kumphezulu wekholamu, umlenze okanye iposti. Kuyilo lwekhabhathi yendabuko, ukubuyisela umva kunye nokubetha kuyongezwa kwiziqithi ezizimeleyo zekhitshi, iipeninsula okanye kumacala ekhabhathi esezantsi.
Ukusetyenziswa okanye iiOnlays -Izicelo kunye nama-onlays ngamaqhekeza omthi okroliweyo wokuhombisa ongezwe kumphezulu wekhabhinethi. Ezi zinto zihombise kakhulu kwaye zihlala zithatha iintlobo zeempawu ezahlukeneyo ezinje nge-fleur de lis, imiqulu, amagqabi, iintyatyambo okanye ii-swirls. Owona msebenzi wabo kukuzisa umnxeba owongeziweyo wobushushu ekhitshini.
Kwikhabhinethi yendabuko yekhitshi, ii-applique kunye ne-onlays zihlala ziqhotyoshelwe kwiingcango zekhabinethi nasebusweni, ngaphezulu kwefriji okanye kumaxabiso, kodwa ngokuthe ngqo inokuncediswa phantse naphina. Ukusetyenziswa kunye nokufakwa kwezinye kungathengwa zilungile ezenziwe kubathengisi abakhethekileyo kunye neengcali zomthi, kodwa zinokwenziwa ukuba zi-odolwe okanye zenziwe ngokwezifiso ngumthengisi wemilitha kunye nabenzi bekhabhathi. Abanye abathengisi banikezela oku ngokwahluka kokuzibophelela okuvumela ukufakwa ngokulula nangokukhawuleza.
Iipaneli zeWainscot -Iipaneli zeWainscot zihlala zisetyenziswa njengonyango lodonga kuyilo lwendabuko, kodwa zinokusetyenziselwa ukongeza ubuqaqawuli kwikhabhathi yekhitshi. Iipaneli zoyilo lwekhabhathi azongezwanga kuphela kumnyango wekhabhathi, kodwa inokusetyenziselwa ukuhombisa umva weekhabhathi okanye isiqithi sekhitshi. Idityaniswe nezinye iinkcukacha ezinje ngemilenze yokuhombisa kunye neeposti, oku kunganika ikhitshi lakho lekhabhathi ifanitshala enjengokubonakala.
Iikhabhathi zasekhitshini zemveli zigxila ekuhombiseni kunye nesitayile esonyusiweyo. Ngokungafaniyo nekhabhathi zekhitshi zale mihla ezisebenzisa ipaneli ethe tyaba kunye neengcango zesitayile, iikhabhathi zekhitshi zemveli ziye zaphakamisa zaza zavala iingcango zephaneli. Nazi izinto ezithandwayo zoyilo lomnyango wekhabhinethi ezifumaneka kwiikhitshi zesiko:
Uyilo lweepaneli eziphakanyisiweyo - Iphaneli ephakanyisiweyo umnyango wekhabhathi yekhabhinethi inepaneli yeziko ephakanyiswe ngaphezu kwawo wonke umnyango wekhabhinethi ehonjiswe ngomda ongaphezulu, umda okanye iprofayili. Ukubonakala kweengcango zekhabhinethi eziphakanyisiweyo kuyahluka ngokuxhomekeka kwisitayile esithile sexesha esikhona ekhitshini. Iingcango zekhabinethi eziphakanyisiweyo zekhabini zineenkcukacha ngakumbi xa kuthelekiswa nomlingane wayo, ucango lwepaneli olushiyekileyo.
Inkqubo ye- iikhabhathi zekhitshi cream eboniswe kwesi sithuba zibonelela ngemfudumalo kunokugqitywa kokuqaqamba okumhlophe. Ukudityaniswa nesiqithi somthi esimnyama okwahlukileyo kunika umdla woyilo kuyilo.
Uyilo lwepaneli ebuyisiweyo - Iingcango zephaneli ezihlaziyiweyo zichasene neminyango yeepaneli eziphakanyisiweyo kwaye iphawulwa yiphaneli yeziko ebanjiswe ngaphantsi komnyango wekhabhinethi. Iphaneli evalelweyo ikwanokuhonjiswa ngomda ojikeleziweyo, umda okanye iprofayili. Xa kuthelekiswa neengcango zephaneli eziphakanyisiweyo, ucango lwekhitshi oluphumileyo lunokubonakala ngakumbi.
Uyilo lomnyango wekhabhathi yeCathedral - Uyilo lomnyango wekhabhathi yicawa yokwahluka kocango oluphakanyisiweyo oluphakanyiswe ngerch ephakanyisiweyo. Uyilo lwekhabhathi yekhathedrali lunokuba ne-arch enye, efumaneke kwinxalenye ephezulu yepaneli yomnyango wekhabhinethi, okanye i-arch ephindwe kabini, efumaneka kwindawo ephezulu nasezantsi kwipaneli yomnyango wekhabhinethi.
Ixabisa malini i-dj yomtshato
Mullion kunye neAccent - Iminyango ye-Mullion kunye ne-accent zihlala zisetyenziselwa ukwaphula i-monotony yeenkuni eziqinileyo zeminyango yekhabhinethi. Inika indlela yokwazisa ngezinto ezixubekileyo kwindawo elawulwa ngumthi wendalo. Iingcango zeAccent zisetyenziselwa ukuqaqambisa indawo ethile ekhitshini. Ezinye iingcango ezithandwayo zesitayile sendabuko zibandakanya iipaneli zeglasi, iglasi ebhaliweyo, iglasi ebunjiweyo, iglasi ekhokelwayo kunye nemizobo eyenziwe ngomthi.
Iingcango zekhabhathi ye-Mullion zinokufana neefestile ze-mullion ezenziwe ngohlobo oluthe tyaba kunye noluthe nkqo olwahlula iiglasi. Inkangeleko yayo iyonke iphefumlelwe kuyilo lwefestile yaseFrance. Iifom ezinesitayile sezinto eziguqulweyo zigobile, zi-arched kunye nedayimane. Iingcango zekhabhinethi ye-Mullion ziphakamile kwaye zinobunkunkqele bokudala kunye nokungaphelelwa lixesha. Ingasetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zeekhitshi zesiko.
Umnyango wekhadibhodi ye-Beadboard - Uyilo lomnyango wekhadibhodi yoyilo luhlala lusetyenziselwa useto lwasekhitshini olunelizwe, indlu yefama okanye umtsalane wendlwana. Ngokwenkcazo, ibhodi yebhodi ngumqolo weeplanga ezincinci zomthi ezifakwe ngokuthe nkqo, zahlulwe ziinduli ezincinci ezibizwa ubuhlalu. Iiphaneli zeBeadboard zihlala zisetyenziswa njengonyango lodonga kodwa zikwabonakala zintle njengeenkcukacha zomnyango wekhabhathi yekhitshi. Iingcango zekhabhathi zekhitshi ye-Beadboard zinokusetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi zemveli ukuba ufuna ukongeza i-rustic vibe kwisithuba, isenza ukuba sive ngathi sifana nasekhaya kwaye sonwabile.
Umnyango wekhabhathi e-Shaker - Enye yeembonakalo ezibonakalayo kwiikhabhinethi zekhitshi, isitayela seShaker saqala ngo-1770 ngexesha le-colonial yaseMelika. Ngokuqhelekileyo ibonakaliswa ngoyilo olulula olunemigca ecocekileyo, eyenziwe ngomthi osemgangathweni, ukwakha okuqinileyo kunye nokusetyenziswa kwendalo. Ngaphandle kwemvelaphi yayo yembali, iikhabhathi zesitayile seShaker zinikezela ngokuguquguquka ngokwendlela yoyilo njengoko inokusetyenziselwa useto lwesiqhelo nolwanamhlanje.
Ukubonakala kotyikityo lwekhabhathi zesitayile se Shaker kubonakaliswa sisiqwenga somnyango esicwecwe esihlanu esineefreyimu zomgaqo kaloliwe. Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi lwekhitshi lubeka ugxininiso ekusebenzeni ngaphezulu kwe-aesthetics yiyo loo nto kungekho nto yokuhombisa okanye iinkcukacha zokuhombisa zinokufunyanwa kuyilo lwayo.
Nje ukuba ugqibe ukuba zeziphi izimbo kunye nezinto ozifunayo kuyilo lwethu unokuzisa izimvo zakho ebomini ngokusebenzisa Isoftware yoyilo lwekhabinethi yasekhitshini . Oku kunokukunceda ugqibezele izicwangciso zakho ngaphambi kokuqesha umyili wezinto ezibizayo okanye akuvumele ukuba wenze uyilo kulwazi oluchanekileyo. Isoftware inokubonelela ngeenkangeleko ezahlukeneyo ngokukhawuleza xa sele uyile uyilo.
Njengokubambelela kubutyebi bemithi yendalo, umhlophe ukwasetyenziswa njengombala wokuqala wepeyinti kwiikhabhathi zekhitshi zemveli. Lo ngowona mbala ubalaseleyo wabanini bamakhaya abangayithandiyo imbonakalo enzima yomthi egqiba iikhabhathi zasekhitshini zemveli, kodwa endaweni yoko bafuna ukwenza ukukhanya okuqaqambileyo kunye nokuqaqamba.
Iikhabhathi ezimhlophe zemveli zasekhitshini zikwacacisa ukubonakala kweklasikhi, okungapheliyo. Inokubhangiswa phantse nayo nayiphi na imibala yokubala, nokuba kukukhanya okanye kumnyama. Kuhamba kakuhle nangalo naluphi na umbala wodonga kunye nezinto zaphantsi. Iikhabhathi ezimhlophe zemveli zasekhitshini zibonelela ngakumbi kwigumbi lokulinga njengoko lisebenza njengebhanti engenanto ekuvumela ukuba wazise izinto ezahlukeneyo kwisithuba.
Ngamanye amaxesha, iikhabhathi ezimhlophe zemveli zifakwa endaweni yomnye umbala okhanyayo onetoni efudumeleyo, yona eyi-beige. I-Beige ikwangumbala ongathathi hlangothi, kodwa xa kuthelekiswa nombala oqaqambileyo, omhlophe omhlophe, unendawo ephantsi etyheli. Iprojekthi yokulinganisa okugqibeleleyo okupholileyo kunye nokushushu kwaye ikwabonelela ngokuguquguquka ngokubhekisele ekuxubeni nasekufaniseni ezinye izinto kuyilo lwekhitshi.
Ngokuchasene nenkolelo yokuba umbala omhlophe unokuba buthuntu okanye uyadika, iikhabhathi ezimhlophe zemveli zasekhitshini zichaneka ngokuthe ngqo. Iikhabhathi ezimhlophe zemveli zasekhitshini zikwanikezela ngenkangeleko ebonakalayo enomdla njengoko ibonakalisiwe ngeenkcukacha zokuhombisa ezongeza ubunzulu kunye nophawu kwimbonakalo yayo iyonke. Ukubekwa koburhabaxa, ngokusebenzisa izinto zokugqiba, kukwanika iikhabhathi ezimhlophe zemveli ukubonakala okwahlukileyo. Ezinye zezinto ezigqityiweyo ezigqityiweyo ezisetyenziselwa iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ziyabandezeleka, zizinto zakudala, zemozulu kunye nokugaya.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambilana, uxinzelelo yindlela yokugqibezela enika iikhabhathi zasekhitshini imbonakalo endala. Iikhabhathi ezimhlophe ezixineneyo zongezwe ngokugqibeleleyo kuseto lwasekhitshini lwasekhaya kuba zinceda ukuphucula ukuhlala okanye i-rustic vibe. Ungasebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe ezixineneyo ukuba ufuna ukwenza iprojekhthi yokubuyisela umva ngakumbi, xa kuthelekiswa nobume bemithi etyebileyo yeenkuni zemveli zasekhitshini.
Iikhabhathi zasekhitshini zemveli zijolise kumbala wombala weklasikhi odityaniswe nokungathathi cala njengamhlophe, beige kunye nemibala emdaka. Le mibala ikwabizwa ngokuba yimibala yomhlaba. Imibala yeekhabhinikhi zemveli zasekhitshini isusela kwiitoni ezishushu ezinje ngecherry ukuya kwimibala ekhanyayo emhlophe.
UBrown uhlala ebonakaliswa kwiikhabhathi zasekhitshini ngokusetyenziswa kweenkuni njengezinto eziphambili zokwakha. Imibala yekhabhathi yokhuni ngokubanzi imnyama ukubonisa iimpawu zokunxiba kunye nokukrazuka. Umthi onemibala emnyama kunye nomnyama nawo ucebisa ngeprojekthi kunye nokuziva okutofotofo.
Iinkuni zeekhabhinikhi zemveli zasekhitshini zihlala zikumbala wazo wendalo, zonyuswe ngamabala ukubonisa ipateni yazo yokugraya ngakumbi, kodwa kwezinye iimeko iinkuni zikwapeyintiwe ukuze zinike inkangeleko eyahlukileyo ngokupheleleyo.
Ukupeyinta iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi zigubungela onke amaqhina endalo kunye neenkozo, ngaloo ndlela zivelise ukubukeka okuthambileyo nokuhlaziyayo. Ukugqitywa kweenkuni iikhabhathi zasekhitshini zisetyenziswa kakhulu kuseto lwendabuko lwekhitshi enje ngesimbo seGcisa, isitayile se-rustic, isitayile selizwe, uVictorian kunye iikhikhini ze-log cabin .
Iikhabhathi zepeyinti ezipeyintiweyo ngokwesiko zihlala zisebenzisa ukungathathi cala okunje ngemhlophe, beige kunye nekhrimu. Imibala ethambileyo ethulileyo efana nokukhanya okukhanyayo, ii-taupes zihlala zisetyenziselwa useto lwasekhitshini lwesiqhelo. Ngamanye amaxesha, i-pastels enjengeyellows ethambileyo nayo isetyenziselwa useto lwasekhitshini lwesiNtu njengesitayile sendlu yokongeza umtsalane kunye nokubuyela umva ngakumbi.
Cosmas 305-030SN Satin Umzimveliso Cabin… Iidola ezingama-29.95 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-3505 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Hearth Creek 12 'Rustic Black Barn Door H… $ 39.95 umthengisi ogqibelele (87) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iinduli zasemazantsi eChrome eziCociweyo isikwere Cab ... $ 22.99 umthengisi ogqibelele (1230) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ixabiso leAmerock Allison 1-1 / 4 kwi (32 mm) Di… $ 26.34$ 30.99 umthengisi ogqibelele (5926) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
izipho zekrisimesi ezimangalisayo zomfazi
ilokhwe yomtshato ene-aksenti eblowu
Imbaleki yendlela emnyama yomtshato
uxelela njani idayimani engeyiyo
ilokhwe yomtshato emfusa nomhlophe